Strategy-based Sales Strategy bụ Ọdịnihu, Groove dịkwa ebe a | Martech Zone
N'ihe banyere ire software SaaS, ichota ndi mmadu abughi ihe omuma nke oru. Ka emechara, nkezi nke mmadụ 5.4 na-etinye aka na otu mkpebi azụmaahịa otu ụlọ ọrụ. Nyere na nyocha nke otu a bụ ụkpụrụ, ahịa ndị dabeere na akaụntụ (ABS) na-arụpụta ihe karịa ị na-achọ ịchọta kpọmkwem ụzọ.
Thezọ dabeere na akaụntụ ahụ maka ire ere, na-eri oge. Chọpụta usoro ihe omimi na usoro iheomume gafere ọtụtụ ebumnuche, yana ịmekọrịta na ozi ahụ n'ofe ndị dị n'ime, ọ ga-adị ka ọ gaghị ekwe omume ọ gwụla ma ị nwere ike ịhazi nzukọ kọmputa. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Ahịa akpaaka.
N’ụbọchị m na - arụ ọrụ na ahịa na Google, achọpụtara m onwe m na m chọrọ onye enyemaka nwere ọgụgụ isi ga - agbaso usoro oge m, usoro na ncheta m na - enweghị iwu. Na mmechi, achọrọ m ihe ga-enyere m aka ịchọta ụlọ m ka m nwee ike iji ọrụ n'aka na-arụ ọrụ mmadụ nke ire. Nke ahụ bụ mgbe a mụrụ Groove, ihe enyemaka maka ire ahịa.
Ihe I nwere ike iji Groove mee
Na ime ka usoro ire ahịa dị mfe ma mara amara, Groove kewara ike ya gaa mpaghara atọ. Site na itinye aka na ndị ụkọchukwu na-enweghị uche na usoro ọ bụla na njem ahụ, Groove na-ejidekwa data dị mkpa iji nyere gị aka ịre nke ọma n'ọdịnihu, ọkachasị maka ndị na-agbaso atụmatụ ABS.
Mmekọrịta: Ghọta ihe niile na-eme na usoro ịzụ ahịa gị
Cyclegha ire ahia ahụ toro ogologo oge na ABS, nke ahụ pụtakwara ọtụtụ metrik iji soro ogologo oge. Iji lelee anya nnụnụ anya banyere usoro niile, ịdebe na nyochaa usoro metrik na ngwa ngwa bụ isi.
Groove na-ewepụta usoro mgbasa ozi nke nzukọ ahụ dum, site na email ọ bụla ezitere ma nata na oku ọ bụla akpọrọ ma laghachi. Ptchọta data a na-enye Groove aka ịmata ụdị usoro ị ga-esi na-arụ ọrụ kacha mma iji ruo atụmanya gị.
Na omenala, ndị ọkachamara n’ahịa ga-eme mkpebi doro anya iji kpokọta data ahụ ma jiri oge na-eme ka ọ nwee nghọta iji chọpụta ụdị usoro na oge na-arụ ọrụ kacha mma. Ihe omuma ya nwere ike inye bu ihe bara uru, mana oge itinye ego adighi ya. Groove na-ewepụta oge n'iwepu ajụjụ a wee hapụ ndị ọkachamara n'ahịa ka ha na-enwu site na usoro dị elu ka ọ na-ejikwa nyocha granular.
Igha: Na-agbagharị usoro na-agbanwe agbanwe
Ibute ụzọ dị mkpa ma a bịa n’ihe gbasara ABS n’ihi nnukwu oge na ego ọ chọrọ. Ndị ọkachamara n'ahịa kwesịrị inwe ike ịhọrọ nke mkpọsa na otu ha chọrọ ibute ụzọ na mgbasa ozi ha, mana yana ọtụtụ ụlọ ọrụ ezubere iche n'otu oge, ọ dị mfe ijikọ oge niile.
Groove na-alụ ọgụ site na ike ya iji kọwaa usoro a na-ekwughachi. Njirimara ya na-enye gị ohere ịmepụta iwu ncheta akpaaka maka ịme kọntaktị na atụmanya gị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgwa sistemụ ahụ, "Maka ndu ndu ọ bụla na akaụntụ, chetara m ka m rute ụbọchị ise mgbe ha banyere sistemụ ahụ, wee tinye ha na LinkedIn ụbọchị ise mgbe nke ahụ gasịrị," rue mgbe ị ga-etinye usoro niile ngwanro Kama iwepụta oge iji mejupụta ihe ncheta iPhone gị ma ọ bụ Kalịnda Google gị, Groove na-etinye iwu maka gị maka ọhụụ ọhụụ ọ bụla.
Nhazi: Na-arụ ọrụ dị ọcha
Ka ndị mmadụ na-etinye aka na ire ere, ka ị ga-enwerịrị uche karịa. Yabụ, ọ dịkarịrị mkpa karịa ịnwe oge iji soro onye ọ bụla tinye aka mee ka ị nwee ike idozi ozi gị na mmasị onye ọ bụla. Enweghị a smart usoro ihe omume ngwa, nke ahụ bụ a otutu oge na email chọrọ.
Nrụpụta ọrụ nke Groove na-ekwu banyere ihe mgbu oge mmemme. Ahịa na-enwe ike ịhụ kalenda gị na nnweta ka akwụkwọ oge ozugbo. Nke a na-ebipụ email azụ na-aga iji kwurịta nhọrọ oge, ọkachasị mgbe ị na-elekwasị anya ọtụtụ mmadụ n'otu nzukọ ndị metụtara ọrịre ahụ.
Ikike ịhazi usoro nke Groove na-enyekwa ndị na-emegharị aka ịhazi oge izipu ozi na oge kachasị mma ma hụ mgbe emepere email maka echiche itinye aka. A ga - enwe ike ịgbanwere usoro dị iche iche dabere na ihe na - arụ ọrụ na ihe na - adịghị arụ ọrụ, na - enye ohere ka ọ chọta nguzo zuru oke wee gafere ọrụ ha ngwa ngwa, mechie ọnụ ahịa ndị ọzọ ma nweta ego karịa.
Kedu ka Groove si pụọ iche?
Groove bụ naanị ihe enyemaka azụmaahịa niile na ahịa nke edobere maka ndị otu ahịa gị niile. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwọta na-emetụta naanị otu ọkwa nke otu gị, Groove na-akwalite ọrụ onye ọ bụla - belata mkpa ọ dị imefu ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche na ndị ọrụ nọ na ndị ọhụrụ mgbe a na-akwalite ha.
Boardbanye na nzukọ gị na Groove bụ usoro dị mfe nke agaghị ewe ihe karịrị awa ole na ole. Site na nkuzi ọzụzụ miri emi, ndị otu anyị nwere ike igosi gị otu esi ahazi mmemme ahụ na mkpa gị. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ndị otu gị mejupụtara 10 ma ọ bụ 1,000 ndị ọkachamara na-ere ahịa, ịbịaru elu bụ ahụmịhe dị mma.
Ka ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye aka na SaaS ịzụta mkpebi, usoro ahịa ahụ kwesịrị ịdị mfe maka ndị na-ere ahịa na ndị ahịa. Groove nwere nlegharị anya ya na ụwa azụmaahịa nke nwere ọgụgụ isi ma chọọ ịme ya ka ọ bụrụ eziokwu.
Tags: ABSna-ere ahịa dabeere na akaụntụuzoNkwado ire ahịanjem ire erepipeline ahịandị ahịa